रामदेवले कोकाकोलालाई किन भने ‘ट्वाइलेट क्लिनर’ ? |
काठमाडौं । हल्का पेय पदार्थ कोकाकोला बहुर्राष्ट्रिय उत्पादन भएकाले उपभोक्तामा यसप्रतिको विश्वास र प्रयोग कायमै रहे पनि यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि दीर्घकालिन हितकर भए नभएको विषयमा भने विवाद कायमै रहेको छ ।
भारतीय योगगुरु रामदेवले यसलाई कोलाकोला र यसका सहायक उत्पादनहरुलाई ‘ट्वाइलेट क्लिनर’को संज्ञा दिँदै कागती, निबुवा, बेलको सर्वत, फलफुलको फ्रेस जुस, दही, मही पिउन तर कोकाकोला पटक्कै नपिउन धेरै बर्षसम्म आग्रह गरे ।
रामदेवको भनाईले विश्व बजारमै कोकाकोलाको बजार धर्मराएपछि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि गुरु रामदेव आचार्य बालकृष्णविरुद्ध उत्रिए । कोकाकोलाको विरोध गर्दा आफूले सुरु गरेको आयुर्वेद व्यवसाय संकटमा पर्ने भएपछि अहिले रामदेवले खुलेर कोकाकोला जस्ता पेय पदार्थको बारेमा बोल्न कम गरेका छन् ।
यद्यपि कोकाकोला स्वाथ्यका लागि कति लाभदायक छ ? भन्ने विषय भारतमा अहिले पनि निकै ठूलो बहसको विषय बन्दै आएको छ । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको प्रभाव उच्च राजनीतिक तहदेखि ठूला मिडियासम्म रहेकाले पनि कोकाकोला जस्ता पेय पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यमा पुग्दै आएको असर उजागर हुन नसकेको देखिन्छ ।
विशेषगरी गर्मी समयमा कोकाकोला, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिन्डाको बिक्री निकै हुन्छ । कतिपय मानिसले भने रामदेवको भनाईमा विश्वास गर्दै यसलाई मन्द बिष मानेर सेवन नगर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यद्यपि व्यापक प्रचार प्रसार र गुलोयो स्वादका कारण बच्चैदेखि यसको लत मानिसहरुमा बसिसकेकाले कागती, निबुवा, बेलको सर्वत, फलफुलको फ्रेस जुस, दही, महीभन्दा कोकाकोला नै बढी बिक्री हुने गरेको छ ।
रामदेवले कोकाकोलामा हानिकारक रसायन हुने भएकाले यसले मानिसलाई दीर्घकालमा क्यान्सरदेखि अल्सरसम्म हुने बताउँदै आएका छन् । कोकाकोलामा एसिडको मात्रा हुने भएकाले यसको धेरै सेवन गर्दा आन्द्रामा घाउ भइ अल्सर हुने चिकित्सकहरुले समेत बताउँदै आएका छन् ।
एसिडकै कारण कोकाकोला पिउँदा डकार आउने गर्दछ । यसरी डकार आउँदा पेटभित्रको दुषित हावा बाहिर गई पेट सवा हुने कतिपयको गलत विश्वास देखिन्छ । भारतमा थुप्रै सामाजिक संघसंस्थाहरुले कोकाकोलाका हानिकारक पक्षबारे आफूहरुले प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गरे पनि ठूला मिडियाहरुले विज्ञापनको लाभमा यस विषयमा साथ नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
विश्वका धेरै अनुसन्धाताले पनि कोकाकोलाका बारेमा नकारात्मक रिपोर्टहरु बाहिर ल्याइरहेका छन् । केही बर्षअघि हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थले गरेको अनुसन्धानबाट कोकाकोलाले मोटोपना बढाउने, जुन विभिन्न रोगका कारण बन्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
कोकाकोला जस्ता गुलिया हल्का पेय पदार्थ पिएकै कारण वर्षमा विश्वभर करीब पौने दुई लाख (एक लाख ८० हजार) मानिसको मृत्यु हुने गरेको, कोक पिएकै कारण विश्वमा हरेक वर्ष एक लाख ३३ हजार मानिस मधुमेहको शिकार हुने गरेको, हरेक वर्ष छ हजार मानिस क्यान्सरको शिकार हुने गरेको, कोक जस्ता पदार्थ पिएकै कारण करीब ४४ हजार मानिसले मुटुको रोग लागेर मृत्यु बहन गर्नुपरेको जस्ता तथ्य पनि बाहिर ल्याइएको छ ।
सन् २०१३ को १९ मार्चमा डेली मेल युकेको रिपोर्ट अनुसार यो तथ्यांक अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । अमेरिकाको प्रतिष्ठित संस्था ‘इन्ष्टिच्यूट फर हेल्थ म्याट्रिक्स एण्ड इभोलुशन ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज् स्टडिज’ ले सन् २०१० मा भारतमा गरेको अनुसन्धानपछि के पाइयो भने भारतमा त्यस वर्ष ९५ हजार ४२७ जनाको मृत्युको एउटा ठूलो कारण कोकाकोला र फेन्टा जस्ता हल्का पेय नै हो ।
त्यसरी मृत्यु हुनेहरूको संख्या सन् १९९० को तुलनामा २० वर्षमा १६१ प्रतिशतले बढेको रहेछ । सो रिपोर्टका अनुसार भारतमा कोकाकोला पिउनेहरूमध्ये ७८ हजार १७ जना मानिस मुटुको बिरामीबाट मृत्यु हुनेगरेको छ ।
छत्तीसगढस्थित दुर्ग, राजनन्दन गाउँ र धमतारी जिल्लाका किसानका अनुसार उनीहरूले आफ्नो धान खेतलाई कीटनाशकबाट बचाउन कोक र फेन्टाको प्रयोग गरेको र त्यो सफल भएको थियो । पानीमा कोक र फेन्टा मिलाएर धान बालीमा छर्किनु कीटनाशकको प्रयोगभन्दा धेरै सस्तो र प्रभावकारी भएको किसानहरूको अनुभवबारे सन् २००४ को ३ नोभेम्बरमा बीबीसी न्यूजले नै समाचार प्रसारण गरेको थियो ।
त्यस्तै, कोक र फेन्टा जस्ता कार्बोनेटेड पेयपदार्थबाट डाइबिटिज, हाइपरटेन्सन र पेटमा पत्थरी हुने संभावना अत्यधिक रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन । दिनमा दुई वा त्यसभन्दा बढी कोक पिउँदा क्रोनिक किड्नी रोग हुने खतरा बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाई छ । अमेरिकी चिकित्सा अनुसन्धान पत्रिकामा सन् २००८ को जुलाई १८ मा प्रकाशित खबर अनुसार कोकाकोलामा फस्फोरिक एसिड बढी हुन्छ, जसले हाम्रो मूत्र प्रणालीमा असर पारी मिर्गौलामा समेत पत्थरीको कारण बन्न सक्छ ।
विश्वको चर्चित पत्रिका ‘डेली एक्सप्रेस’ का अनुसार जो मानिस हरेक दिन कोकाकोला पिउँछन्, उनीहरूलाई मुटु या नसाको रोग हुने खतरा ४३ प्रतिशत हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले अध्ययनका दौरान के पाए भने कोकाकोला नपिउनेहरूमा हृदयघातको खतरा कम देखिएको थियो । अझ अर्को रोचक तथ्य त के पाइयो भने कोकाकोला पिउनेहरूको प्रजनन् क्षमतासमेत कमजोर हुन्छ ।
अल्कोहल नहुने भएकाले यस्ता पेयलाई हल्का पेय भनिएको हो, तर कोकाकोला यस्तो हल्का पेय हो, जसमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यास राखिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई कार्बोनेटेड पेय भनिएको हो । हामीले कोक या फेन्टा खाँदा केहीबेरमै नाक या मुखबाट एकप्रकारको ग्याँस बाहिर निस्किएको या डकार आएको महसूस गर्ने गर्छौं । त्यो खासमा कार्बनडाइअक्साइड हो ।
रगतमा भएको ग्लुकोजसँग दहन क्रिया भएपछि त्यो शरीरका लागि हानिकारक तत्वहरू समेट्दै कार्बनडाइअक्साइडका रूपमा शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । कार्बनडाइअक्साइड मानव शरीरले फाल्ने बायु हो । तर, कोकमार्फत हामी त्यही कार्बनडाइअक्साइड पिउने गछौं ।
फोक्सोले काम नलाग्ने भनेर फाल्ने कार्बनडाइअक्साइड हामीले पेट, रगतहुँदै दिमागसम्म पुग्छ, सोही कारण कोक पिएपछि नाकमा जलन हुन थाल्छ । कोकाकोलामा सोडियम मोनो ग्लूटामेट, ब्रोमिनेटेड भेजिटेबल आयल, मिथाइल बेन्जिन र एडोसल्फान जस्ता विषाक्त रसायन हुने गरेको पाइएको छ ।
कोकाकोलाको अर्को घातक रसायन हो, क्याफिन । यो क्याफिनकै कारण कोक पिउने बच्चामा टाउको दुखाइ, निद्रा नलाग्नु, चिड्चिडापन आदि समस्या देखा परेको अनुसन्धानकर्ताहरूले पाएका छन् । कोकाकोलामा हानिकारक कीटनाशकको निर्धारित मात्राभन्दा धेरै बढी घातक रसायन हुने भएकाले यसलाई कीटनाशकभन्दा खतरनाक मानिएको हो ।
यसमा भएको चिनी र एसिड नै बच्चाहरूको दाँत कीराले खाने र सडेर जाने कारण हुन् । किनकि, कोकमा भएको एसिडले दाँतको इनामेल नै मेटाइदिन्छ र दाँत सिरिङ्ग हुने रोग देखा पर्छ र विस्तारै दाँत कीराले खान थाल्छ ।
कोकाकोलामा पीएचको मात्रा २.४ देखि लिएर ३.५ सम्म हुन्छ, जुन एसिड अर्थात अम्लकै अर्को रूप हो । घरहरूमा शौचालय सफा गर्दा प्रयोग गरिने ट्वाइलेट क्लिनरको ‘पीएच’ मानक पनि कोकाकोला सरह नै हुन्छ । यही कारण कोकाकोलालाई पनि शौचालय सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाबा रामदेवले यसलाई ट्वाइलेट क्लिनर भन्नुको खास कारण यही हो, जुन विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आजबाट, रेलदेखि लगानीका महत्वपूर्ण सम्झौताको तयारी
‘अभिभावक सचेत नहुँदा चुरोट सुर्ती खाने युवायुवतीको संख्या बढ्यो’
बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो कमाइरहेका छन् भन्दै परिसंघले जापानी लगानीका लागि…
बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासको निर्णयप्रति सत्ताधारी दलबाटै आपत्ति